Haddii adiga ama qof aad taqaan ama la shaqeyso ay ka faa'ideysan karaan adeegyada WIC, fadlan la xiriir xarunta caafimaadka ee kuugu dhow ama wac Neeska WIC Khadka 1-800-8-NEV-WIC (1-800-863-8942)
Hubso inaad ogtahay dheelitirka sheygaaga cuntada ee WIC adoo adeegsanaya Liiska Dukaameysiga ee hadda jira ama rasiidkii ugu dambeeyay.
U dukaameyso alaabtaada WIC, ka dibna aad laynka wax lagu iibsado. Ka raadi calaamada ku qoran “WIC Halkaan Lagu Aqbalay” haadka ama haddii aad ku sugan tahay mid ka mid ah dukaamada lagu tilmaamay “WIC Lane Kasta” waad iska hubin kartaa haad kasta.
Hal caddeyn degenaansho ayaa loo isticmaali karaa in lagu caddeeyo qoyska oo dhan. Caddaynta deggenaanshaha waalidka / ilaaliyaha waxay khusaysaa ilmaha / canuga (magacu uma baahna inuu ka muuqdo dukumintiga la isticmaalay).
Sideen ku ogaan doonaa dheelitirka dheefta cuntada ee WIC?
Wac Adeegga Macaamiisha EBT 1-844-892-2932 oo raac tilmaamaha.
Waxaad u baahan doontaa inaad la xiriirto rugta caafimaadkaaga ee WIC si aad ugala hadasho wixii isbeddel ah ee ku imaan kara gargaarkaaga cuntada.
Waa inaad la xiriirtaa shaqaalahaaga WIC Clinic. Had iyo jeer hubi in cinwaankaagu sax yahay.
PIN-kaagu waa lambar sir ah oo ka kooban afar lambar oo kuu oggolaanaya inaad ku isticmaasho kaarkaaga Nevada WIC EBT dukaanka raashinka. Kaarkaagu ma shaqeyn doono illaa aad ka soo wacdo lambarka Adeegga Macaamiisha EBT oo aad dhaqaajiso kaarkaaga oo aad dejiso PIN. Xullo afar lambar oo si fudud aad ku xasuusan karto.
Ka wac Adeegga Macaamiisha EBT 1-844-892-2932 si aad u doorato lambar cusub.
Kawaran hadaan galo nambarka khaldan ee dukaanka raashinka?
Haddii aad geliso PIN khaldan, waxaad heli doontaa saddex fursadood oo dheeraad ah oo aad ku geli karto lambarka saxda ah. Ka dib isku dayga afaraad, waxaad u baahan doontaa inaad wacdo rugtaada caafimaadka si aad u furto biinkaaga ama ma awoodi doontid inaad isticmaasho kaarkaaga illaa 12:01 am maalinta xigta.
Haddii kaarkaaga lumo ama la xado, waxaa lagu beddeli karaa rugta caafimaadkaaga. Isla marka aad ogaato kaarkaaga EBT inuu lumayo / la xaday, wac xaruntaada caafimaadka isla markiiba si ay uga shaqeeyaan kaarka; tani waxay kahortagi doontaa dheefahaaga inuu adeegsado qof aan fasax u lahayn. FIIRO GAAR AH: Haddii aadan soo wicin si aad wax u joojiso oo dheefaha loo isticmaalo, dib looma soo celin karo.
WALIGAA ha u sheegin Lambarkaaga Aqoonsiga Shakhsi ahaaneed (PIN) qof kale oo aan ka ahayn wakiilkaaga loogu talagalay.
Ka waran haddii kaarkaygu uusan ka shaqeyn dukaanka?
Koobinta kaarkaaga WIC EBT mar labaad ayaa ah mararka qaarkood wixii loo baahdo.
Haddii qalabka birlabku dhaawacan yahay, weydii qasnajiga haddii ay gacanta ku geli karaan lambarka kaarkaaga. Waxaad u baahan doontaa inaad geliso lambarkaaga PIN, qasnajiga looma oggola inuu soo galo PIN ka-qaybgalaha.
Marar badan khaldan PIN isku day ah? Wac xafiiska WIC ee deegaankaaga waxayna furi karaan lambarkaaga PIN. Ama, waxaad wici kartaa adeegga macaamiisha 1-844-892-2932 si aad dib ugu dhigto ama ugu beddesho lambarkaaga PIN taleefanka.
Haddii aad u malaynayso in dukaanku qalad sameeyey WAA inaad wacdaa / aaddaa rugta caafimaadkaaga isla marka aad khaladka ka war hesho. Bakhaarka ama Xarumaha WIC midkoodna ma awoodaan inay ku soo celiyaan alaabtaada Kaarkaaga Nevada WIC EBT Card. Rugtaada caafimaad ayaa awoodi doonta inay wacdo xafiiska WIC ee Gobolka si ay u soo sheegto iyo / ama u gudbiso dalab.
Ka waran haddii aanan awoodin inaan alaab ka iibsado dukaanka?
Sababta tani waxay noqon kartaa maxaa yeelay:
Isu dheellitirka cuntadaada WIC waa mid aad u hooseeya si loo iibsado sheygan.
Ma aha shay ku jira liiska wax iibsigaaga ama cabbirka lama oggola.
Tani waa shey u baahan in lagu daro Liiska Waxsoosaarka WIC ee La Ansixiyay.
Ma haysatid lacag kugu filan oo waxaad u baahan tahay inaad la xiriirto rugtaada caafimaad.
Haddii tani dhacdo:
Khasnajiga wax ma beddeli karo si uu kuugu oggolaado inaad hadda alaabta iibsato.
Hubi dheelitirka cuntadaada. Haddii aad hubto inaad haysato bidix kugu filan, hubi WIC UPC Database si aad u aragto inaad leedahay cabbirka saxda ah ama sumadda.
Haddii aad u malaynayso inay qalad tahay, sawir ka qaad calaamadda alaabta, oo ay ku jiraan lambarka UPC oo wac rugta caafimaadka ee deegaankaaga.
Si aad u sameysatid biinkaaga kaar cusub.